Uzobhadla ejele iminyaka owabulala umculi
UMVUYISI Mabhuda eshona phansi ekhulukuthu ngemuva kokugixabezwa iminyaka engu-25 ngecala lokubulala uLindokuhle Cele Isithombe: BONGANI MBATHA/ANA
Khulekani Maseko, Nomonde Zondi | March 31, 2021
UTHOBEKE amanxeba umndeni wesishoshovu esabulawa, yiNkantolo eNkulu yaseThekwini igweba umbulali iminyaka ewu-25 ebhadla ejele, izolo.
UMvuyisi Mabhuda (32) ugwetshwe yile nkantolo ngecala lokubulala uLindokuhle Cele (24) waseMlaza, owayewumculi weHip hop aphinde abe yisishoshovu esilwela amalungelo abathandana nobulili obufanayo.
UNksz Nombuso Cele ongunina omncane kamufi, uthe bewumndeni bajabule ngokuthi ekugcineni ubulungiswa benzekile.
“Iminyaka ewu-25 ejele ngeke ibuyise indodana yami, kodwa izoba isibonelo kubabulali. Okungenani umndeni usuthobeke amanxeba, kubuhlungu kunjalo njengoba kuvela ukuthi emanxebeni awu-21 agwazwa wona, awu-17 yiwona ambulala,” kusho uNksz Cele.
Uthe bafisa ukubonga uNkulunkulu ngokuthi uLindo washona ngoba impilo yakhe yayingasophinde ifane, ngendlela ayelimele ngayo.
ULindokuhle washonela esibhedlela iPrince Mshiyeni Memorial ayengeniswe kuso ngemuva kokuthi egwazwe amanxeba awu 21, ngoFebhuwari nyakenye. UMabhuda waboshwa ngosuku lwesehlo emuva kokuthi egwaze umufi engasesitolo eMlaza emini kubuka wonke umuntu. Ummese wawushiya ugaxele esweni, kanti ugqunywe esitokisini kwaze kwabe uyagwetshwa, izolo.
Ebufakazini obanekelwa inkantolo, ummangalelwa uthi wayediniwe ngoba umufi nabangani bakhe bamfakela izidakamizwa ngesikhathi bephuza bonke ngosuku lukancibijane, bamdlwengula.
UNkk Narini Hiralall obambe njengejaji okuwuye obephethe leli cala, ngesikhathi ekhipha isigwebo, uthe ubufakazi obunekelwa inkantolo ngummangalelwa abubambeki. “Ummangalelwa wahamba waya kubo eBluff amasonto amahlanu ngakho wayenesikhathi esanele ukuthi udaba lwakhe wayengalubika emaphoyiseni. Akenzanga njalo, ngakho lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi wayehlose ukuziphindiselela.
“Le nkantolo kumele ibubhekisise ubucayi becala owalenzayo, iphinde ibhekelele ukuphepha komphakathi ngokuthi ikunikeze isigwebo esikufanele,” kusho uNkk Hiralall.
Inkantolo ithe isenzo sikaMabhuda sikhombisa inzondo ebhekiswe kubantu abathandana nobulili obufanayo, njengoba kwavela ukuthi ngesikhathi egwaza umufi akamnikezanga ithuba lokuchaza ngayemsola ngako.
Emthalalisela, ummeli wakhe uMabhuda, uMnuz Chiliza (elingatholakalanga igama lakhe), uthe uMabhuda akakaze atholakale enecala phambilini futhi uyazisola ngesenzo sakhe. Uveze ukuthi uMabhuda unengane eneminyaka eyisithupha, namabhizinisi amabili ondla ngawo umndeni wakhe njengoba kuwuyena omdala kubo.d
UMNDENI kaLindokuhle Cele usemukele isigwebo inkantolo esinike umbulali. Ophethe ibhuku ngunina omncane kaLindokuhle uNksz Nombuso Cele Isithombe: BONGANI MBATHA/ANA
Inkantolo ithe amaphuzu abekwa ummeli, awaqinile ngokwanele ekutheni angagwema inkantolo ukuthi imnike isigwebo esifanele. Ngesikhathi kuqhubeka ukwendlalelwa kwesigwebo, uMabhuda ubezifihle ubuso ngejakhethi.
UNksz Hlengiwe Buthelezi weLesbian Gay Bisexual and Transgender KwaZulu-Natal, uthe bayasamukela isigwebo.
“Yize besifisa isigwebo esikhulu kunalesi, kodwa lesi asitholile siyawuthumela umyalezo, ikakhulu ebugebengwini obenziwa ngabazonda abathandana nobulili obufanyo. Ukuboshwa kwakhe ngeke kulivuse ilungu lethu kodwa siyajabula ngesigwebo,” kusho uNksz Buthelezi.